ROSA Enterprise Desktop X4 wuxuu la yimid Kernel 4.15, KDE4 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
ROSA Linux waa nidaamka qeybinta Linux iyo nidaamka howlgalka, oo ay soo saartay shirkadda Ruushka ee LLC NTC IT ROSA. Waxaa lagu heli karaa saddex nooc oo kala duwan: ROSA Desktop Fresh, ROSA Enterprise Desktop iyo ROSA Enterprise Linux Server, beegsashada labadii ugu dambeysay isticmaaleyaasha ganacsiga.
ROSA waxay asal ahaan ka soo baxday fargeeto ah qaybinta hadda ka timi Faransiiska Linux qaybinta Mandriva wixii markaa ka dambeeyayna si madaxbanaan ayey u horumartay.
Markii hore waxaa kaliya loogu talagalay adeegsadayaasha ganacsiga, laakiin dhammaadkii 2012 ROSA waxay bilowday qaybinta dhammaadka adeegsadaha ku wajahan, Desktop Fresh.
Qaybinta kaladuwan ee lagu beegsanayo isticmaaleyaashii hore ee Mandriva, sida OpenMandriva Lx ama MagOS Linux, ayaa hadda ku saleysan ROSA.
1 Ku saabsan nooca cusub ee ROSA Enterprise Desktop X4
1.1 Riwaayado kale
2 Soo dejiso oo hel ROSA Enterprise Desktop X4
Ku saabsan nooca cusub ee ROSA Enterprise Desktop X4
Dhawaan shirkadda ROSA waxay soo bandhigtay nooca cusub ee ROSA Enterprise Desktop X4, ku saleysan barmaamijka ROSA Desktop Fresh 2016.1 oo leh desktop KDE4.
Noocaan cusub waxay ku darsataa taageero tiro badan oo qalabka qaabeynta ah, sahlanaanta rakibidda iyo u adeegsiga xitaa kuwa isticmaala ee ka bilaabaya Linux.
Marka la diyaarinayo qaybinta, feejignaan gaar ah ayaa la siiyaa xasilloonida iyada oo kaliya ay ku jiraan qaybo la tijaabiyey oo lagu tijaabiyay dadka isticmaala ROSA Desktop Fresh.
Nidaamka qalliinka si buuxda ayaa loogu hagaajiyaa inuu ka shaqeeyo jawi shirkadeed waxaana lagu dari karaa alaabooyin kale oo ay soo saartay STC IT Rosa, oo ay ku jiraan shahaadooyin, kuwaas oo u oggolaanaya dhisidda kaabayaasha wax kasta oo murugsan.
Waxyaabaha cusub ee ROSA Enterprise Desktop X4 wuxuu muujiyaa khadka cusub ee rosa-desktop kernels oo ku saleysan ROSA iyo Ubuntu patches si aad u hesho taageero ka fiican xagga qalabka.
Taas oo Kernel-ka caadiga ahi yahay Linux 4.15 oo leh dhejisyo Ubuntu 18.04 oo waxaa ku jira astaamo dheeri ah sida habka Preemption Full iyo taageerada SELinux halkii laga heli lahaa AppArmor.
Qaabkan cusub ee qaybinta waxaad ka heli kartaa ROSA Audit Viewer, taas oo ah dhammaystirka taxane ah korontada shirkadaha 'ROSA' ee loogu talagalay dadka isticmaala shirkadaha.
Intaas waxaad ka heli kartaa Xaqiijinta Laba-Xaqiiqo Soo-gal si loo hagaajiyo amniga xogta (ikhtiyaar).
Saaxir cusub oo la cusbooneysiiyay si uu ugu xirnaado Windows AD domain oo leh autofill inta badan xuduudaha.
Sidoo kale rakibe la cusbooneysiiyay oo awood u leh inuu ku rakibo NVme iyo M.2 SSD oo uu isticmaalo F2FS, Btrfs oo leh Zstd iyo qaabab kale oo aan caadi ahayn.
Nooca aasaasiga ah ee nidaamka qalliinka waxaa ku jira noocyo badan oo codsiyo ah oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u shaqeyso bilowga rakibidda ka dib: Browser Firefox-ESR, macmiilka emailka ee Mozilla Thunderbird, xafiiska xafiiska LibreOffice, GIMP iyo tifaftireyaasha muuqaalka ee Inkscape, tifaftiraha muuqaalka ee KDEnlive, macmiilka fariinta u diraya Pidgin, ciyaartoyda warbaahinta iyo codsiyada kale.
RED X4 wuxuu la jaan qaadayaa qoyska "1C" ee barnaamijyada iyo adeegyada 'CryptoPro utility', iyo sidoo kale barnaamijyo badan oo lahaansho.
Nooca cusub ee 'distro' wuxuu adeegsanayaa nooca 4.15 ee Kernel, inkasta oo noocyada 4.18, 4.20 iyo 5.0 sidoo kale laga heli karo keydadka.
Kombuyuutarka KDE4 wuxuu leeyahay isdhexgalka barnaamijyada cusub ee KDE5, cusbooneysiinta naqshadeynta iyo adeegsiga qeybaha sida gaarka ah loogu sameeyay ROSA.
Naqshadeynta iyo ergonomikada nidaamka waxaa lagu sameeyaa qaabka shirkadaha, iyadoo la adeegsanayo walxo iyo barnaamijyo si gaar ah loogu sameeyay ROSA: SimleWelcome, Klook, RocketBar iyo kuwa kale.
Maareynta nidaamka, oo ay ku jiraan gelitaanka Windows AD iyo domainka FreeIPA, waxaa lagu sameeyaa koronto adeegsiga garaafka oo lagu dhex daray hal xarun KDE
Browser-ka ugu weyn ee Firefox-ESR waxaa lagu dhisay KDE, in kasta oo biraawsarka Yandex.Browser loo dooran karo in lagu daro.
Barnaamijyada Java waxaa lagu taageeraa iyadoo la adeegsanayo java-1.8.0-openjdk horay loo sii rakibay.
Soo dejiso oo hel ROSA Enterprise Desktop X4
Sawirada rakibida ROSA Enterprise Desktop X4 si guud looma heli karo iyo waxaa la heli karaa oo keliya haddii si gooni ah loo dalbado.
Waad heli kartaa sawirka nidaamka, kaliya waa inaad aadaa bogga rasmiga ah ee mashruuca halkaas oo aad ka heli karto macluumaadka si aad u codsato sawirka nidaamka.
Xidhiidhku waa sidan soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » ROSA Enterprise Desktop X4 wuxuu la yimid Kernel 4.15, KDE4 iyo inbadan